सिहदरवार घेर्ने विरुद्धमा प्रधानमन्त्री ओलीको आयो यस्तो कडा टिप्पणी | सहारा टाइम्स
Home » Main-News » सिहदरवार घेर्ने विरुद्धमा प्रधानमन्त्री ओलीको आयो यस्तो कडा टिप्पणी
सिहदरवार घेर्ने विरुद्धमा प्रधानमन्त्री ओलीको आयो यस्तो कडा टिप्पणी
काठमाडौँ, जेठ ३ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तराईमा जनताले समर्थन नगरेपछि आन्दोलनरत दल काठमाडौँ छिरेको आरोप लगाउनु भएको छ ।
मधेशवादी दलले दुई दिनदेखि सिहदरवार घेराउ गर्दै आएको विषयलाई लक्षित गर्दै उहाँले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको अभिमत तथा विधि र प्रक्रियाबाट निर्णय हुने भएकाले त्यस बाटामा आउन मधेशवादी दललाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधानसभाका ९२ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानविरुद्ध पुनर्लेखनको आन्दोलन गर्नु नेपालको विरुद्ध भयानक षड्यन्त्र हो । पुनर्लेखनको अधिकार यो संसद्लाई छैन, जायज माग छ भने वार्ताबाट संशोधन हुन्छ ।”
एमालेका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “नेपालीले भनेको नमान्ने, कसले भनेको मान्ने हो ? केटाकेटी जिद्दी गर्ने ? सिंहदरबार अगाडि ट्राफिक जाम हुने गरी जनतालाई दुःख दिन गरिएको धर्नालाई सरकार सधँै टुलुटुलु हेरेर बस्दैन । लोकतन्त्रमा कानुनको राज हुन्छ । तोडफोड र हिंसा नगर्नुस्, आन्दोलन रोकेर वार्तामा आउनुस्, बरु जनताको सेवा गर्ने हो भने पुनःनिर्माणका लागि स्वयसेवा गर्नुस् ।”